Nzvimbo dzevashanyi dzinopenya murima rekufamba kweEurope
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau dzeEurope » Nzvimbo dzevashanyi dzinopenya murima rekufamba kweEurope
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Nhau Dzakanaka • nhau • Rail Kufamba • Kuvakazve • Resorts • Kutarisirwa • ushanyi • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Shanduro ichangoburwa yeQuarterly Barometer inoratidza kuti nzvimbo dzakashinga dzeEurope mukutarisana nekuparadza Covid-19 denda iri nzvimbo dzekuzorora.
Sezvo pa27th Gumiguru, huwandu hwakawanda hwenzendo dzekubhururuka kweEU neUK, kwekota yechina ye2020, vaive 85.6% kumashure kwavaive panguva yakaenzana gore rapfuura. Nenzira, Paris, iyo inowanzo kuve yechipiri nzvimbo inonyanya kuzivikanwa kuEurope, yakwira kumusoro, kunyangwe kubhukwa kwayo kuri 82.3% kuseri kwematanho e2019.
Mune chinzvimbo chemaguta makuru eEU akasimba kwazvo (kureva.: Maguta ane angangoita 1.0% mugove wevanosvika kune dzimwe nyika), nhau hadzina kunyanya kutyisa; uye dingindira rakajairika nderekuti dzese dzakanyanya nzvimbo dzekuzorora. Pamusoro pechinyorwa ichi ndiHeraklion, guta guru reKrete, rinozivikanwa neImba yekare yeKnossos. Ikoko, kubhururuka kwendiza kunongova 25.4% kuseri kweiyo 2019 nhanho. Panzvimbo yechipiri ndiFaro, iyo gedhi rinoenda kunharaunda yePortugal yeAlgarve, inozivikanwa nemabhishi uye nzvimbo dzekutandarira gorofu, 48.7% kumashure. Nzvimbo dzinotevera nhatu dzinotorwa neAtene, 71.4% kumashure; Naples, 73.4% kumashure; uye Larnaca, 74.2% kumashure. Maguta ari muhafu yepiri yeiyo rondedzero, mukuburuka kurongeka, anosanganisira Porto, 74.5% kumashure; Palma Mallorca, 74.6% kumashure; Stockholm, 75.8% kumashure; Malaga, 78.2% kumashure; uye Lisbon, 78.8% kumashure.
Iyo data inoratidza kuti vanhu vachiri kuita zvirongwa zvekufamba; uye mukati mezvirongwa izvi pane maitiro mashanu akajeka. Kutanga, zororo uye wega kufamba kuri kusimudzira zvirinani kupfuura bhizinesi rekufamba, izvo zviriko zvisipo izvozvi. Chechipiri, kubhuka kunoitwa panguva yezororo yeKisimusi. Chechitatu, vanhu vari kubhuka kunyange chiziviso chipfupi pane zvakajairwa, pamwe vangwaririra nezvirambidzo zvekufamba zvavanoiswa pasina yambiro. Chechina, mari dzinogara dziri kudivi rakadzika, nendege dzinoita zvese musimba radzo kuyedza vafambi vanodzoka; uye chechishanu, nzvimbo dzakaramba dzakavhurika pakufamba kweEU, senge Stockholm, dzakatambura zvakanyanya.
ECM-ForwardKeys Air Travelers 'Traffic Barometer inobvumira anoenda ekushambadzira masangano (DMOs), kuti aone mafambiro ayo, munguva ino yedambudziko, akanyatsojeka akasiyana neakawanikwa neindasitiri gore rapfuura. Iyo data kubva kune ichangoburwa barometer inoratidza simba uye kugadzikana kwemaguta, kunyangwe iyo indasitiri yemisangano ichiri kumhanya kumashure; uye mwedzi yapfuura yanga yakaoma zvikuru kushanya kweguta. Ino yakaoma nguva inoshungurudza kune vanobatika mukati medzimwe nzvimbo uye maDMO.